KDEApps1: Fijery voalohany manodidina ny firaketana Community Community KDE | Avy amin'ny Linux
Rehefa miresaka isika GNU / Linux ary ny azy ireo Community Communities na ny azy ireo Tontolon'ny Desktop tsy azo ihodivirana fa hisongadina foana 2 izy ireo, izay tsy lehibe ihany fa tena mamokatra amin'ny lafiny fampiharana novolavolaina ho antsika Rafitra miasa malalaka sy malalaka.
Ny iray dia ny "Vondrom-piarahamonina GNOME" ary ny iray hafa ny "Community Community". Ary amin'ity famerenana voalohany ity "(KDEApps1)" hanomboka amin'ny fijerena voalohany ireo efa misy isika fampiharana ofisialy de "Community Community", manomboka amin'ireo ao amin'ny sehatry ny Fampivoarana ny lozisialy.
Momba ny fampiharana ofisialy de "Vondrom-piarahamonina GNOME" izahay koa efa naneho hevitra teo aloha. Tsy ny tsirairay ihany fa ny maro amin'izy ireo tetikasa sy fandraisana andraikitra. Iray amin'izy ireo, noresahina tao amin'ny Lahatsoratra mifandraika teo aloha izay rohy avelantsika eo ambany etsy ambany, raha misy te hanontany azy:
Raha mila fampahalalana fanampiny sy mahasoa momba ny Teknolojia ampiasaina by the "Vondrom-piarahamonina GNOME" ity manaraka ity dia azo zahana rohy. Na raha izany no izy, momba ny Tontolo iainana Desktop XFCE, ny manaraka rohy.
1 KDEApps1: Fampiharana ho an'ny fampandrosoana lozisialy
1.1 Fampandrosoana - Applications KDE (KDEApps1)
KDEApps1: Fampiharana ho an'ny fampandrosoana lozisialy
Fampandrosoana - Applications KDE (KDEApps1)
Amin'ity faritry ny Fampivoarana ny lozisialy, la "Community Community" efa nivoatra tamim-pomba ofisialy Ny fampiharana 19 izay horesahintsika vetivety sy hanehoan-kevitra momba ny 10 voalohany, ary ny 9 sisa tavela dia holazainay:
Cervisia: Rafitra fanaraha-maso kinova fanaraha-maso kinova. Natao hampiharina ny programa CVS sy ny rafitra fanaraha-maso kinova hafa amin'ny alàlan'ny interface mirindra, manome ny famahana ny fifanolanana, ny mpijery tantara sy ny tsy fitoviana, ny toeran'ny rakitra kopia miasa, ary ny fampiharana ny ankamaroan'ny asan'ny fanaraha-maso ny kinova.
Clazy: Plugin compiler clang izay manome fampitandremana mifandraika amin'ny fanao Qt tsara.
ELF Dissector: Inspecteur ilaina ho an'ny mimari-droa ELF, indrindra rehefa mila manao asa toy ny fitsidihana ny fiankinan-doha amin'ny famakiam-boky sy ny marika, ny fandalinana ny haben'ny rakitra ELF, sns.
Galerie Kirigami: Mpikaroka elanelana an-tsary ho an'i Kirigami, izay rafitra KDE namboarina mba hamoronana rindranasa mifamatotra, izany hoe ireo fampiharana izay azo ampifanarahana amin'ny tontolon'ny fikasihan-tanana sy ny birao.
Heaptrack: Fitaovana rindrambaiko izay manara-maso ny fizarana fahatsiarovana rehetra ary manisy an-tsoratra ireo zava-nitranga ireo tamin'ny dian-tongotra mba hahafahanao mampiasa fitaovana natokana hahafahanao mandika ny fanadihadiana fitadidiana fitadidiana fitadidiana maimaimpoana.
KAppTadidio: Fampiharana mahasoa hanombohana haingana amin'ny fampiasana modely efa misy izay manome kaody fototra izay matetika soratana miverimberina sy rafitra marina.
KCachegrind: Fitaovana sary an-tsary momba ny fanadihadiana momba ny fahombiazana ampiasaina hamaritana ireo ampahany amin'ny programa izay mandany fotoana betsaka indrindra mandritra ny famonoana.
KDebugSettings (Preferansa KDebug): Ahafahanao misafidy ny QLoggingCategory aseho. QLoggingCategory dia mampiseho hafatra avy amin'ny rindranasa ao amin'ny console.
Kdesrc-build: Fitaovana ahafahanao manangona KDE mora foana avy amin'ny kaonty loharano loharano.
Kdesvn: Mpanjifa subversion izay mampiasa ny API fananganana Subversion teratany fa tsy ny famoahana fotsiny ny fivoahan'ny fitaovana avy amin'ny tsipika fibaikoana, toy ny fanaon'ny ankamaroan'ny mpanjifa.
Fampiharana hafa novolavolaina tamin'ity sehatry ny Fampivoarana ny lozisialy avy amin'ny "Community Community" Izy ireo dia:
Fampivoarana: Tontolo iainana fampiroboroboana
KDiff3: Interface ho an'ny diff / patch
KImageMapEditor: Mpanonta sarintany sary HTML
Kompare: Fifanarahana Diff / Patch
voafaritra: Rafitra fandikana ampiasain'ny solosaina
Massif-Visualizer: Fifaneraserana mpandinika
Drafitra anatiny OSM ho an'ny KDE: Drafitra anatiny OSM
Elo: Modely UML
Raha fintinina, momba ity hevitra voalohany ity "(KDEApps1)" amin'ireo efa misy rehetra fampiharana ofisialy de "Community Community", izay niresahanay manokana sy nampahafantarinay ireo an'ny sahan'i Fampivoarana ny lozisialy, matoky izahay fa hampahafantatra bebe kokoa ny matanjaka sy mahatalanjona ity rindrambaiko fitaovana tsara tarehy sy miasa mafy Fiarahamonina Linuxera manolotra antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » KDEApps1: Fijerena voalohany amin'ny Applications Community KDE
Alain dia hoy izy:
Tena mahaliana, misaotra betsaka!
Mamaly an'i Alain
Miarahaba, Alain. Misaotra anao tamin'ny hevitrao, mahafaly foana ny mitatitra zavatra sarobidy amin'ny Vondron'olona.
EdgeX 2.0 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny interface, API, serivisy vaovao ary maro hafa